ngaphezulu ...Kwenzelwe izinjini zokucinga
Dala inkundla yamahhala
Khetha igama le-akhawunti (isizinda sakho) bese ufaka ikheli lakho le-imeyili. Qaphela ukuthi iphasiwedi yakho eyinhloko yomqondisi izothunyelwa ekhelini lakho le-imeyili. Awusoze uthole ama-imeyili ogaxekile noma izikhangiso ezivela kithi. Noma kunjalo, kungenzeka ukuthi i-imeyili enephasiwedi yakho eyinhloko yomlawuli ifike kufolda yakho yogaxekile.
Uhlelo lwethu lwe-othomathikhi luzosetha iforamu yakho yamahhala ngemizuzwana. Ungangena kuyo ngokushesha futhi uphathe konke. Zisindise izinhlungu eziningi zekhanda nemali ngokusebenzisa inkundla yamahhala esikhundleni sokufakwa kwenkundla yakho kuseva yakho! Akudingeki ukhathazeke ngokuhlaselwa kogaxekile, ukuvuselelwa kwesoftware, ukufinyeleleka, izindleko zethrafikhi, uhlelo noma yini enye. Gxila emphakathini wakho futhi sizokwenza okusele! Ukuphepha kwemininingwane yakho kubalulekile kithi. Kungakho amaseva ethu etholakala e-Austria futhi ngenxa yalokho angaphansi kwemithetho eqinile yokuvikela idatha. Ngenxa yomphakathi wethu oyingqayizivele, isithangami sakho singavakashelwa izinkulungwane zamalungu ngokushesha nje kokubhalisa. Iforamu yakho ilungele ukuqala masisha ngemuva kokungena ngemvume futhi kulula ukuyifisa.
Igama le-akhawunti [A-z no-0-9]: .webboard.org
Ngendalo yakho uyakwamukela Imigomo yokusetshenziswa.
Uhlelo lwethu lwe-othomathikhi luzosetha iforamu yakho yamahhala ngemizuzwana. Ungangena kuyo ngokushesha futhi uphathe konke. Zisindise izinhlungu eziningi zekhanda nemali ngokusebenzisa inkundla yamahhala esikhundleni sokufakwa kwenkundla yakho kuseva yakho! Akudingeki ukhathazeke ngokuhlaselwa kogaxekile, ukuvuselelwa kwesoftware, ukufinyeleleka, izindleko zethrafikhi, uhlelo noma yini enye. Gxila emphakathini wakho futhi sizokwenza okusele! Ukuphepha kwemininingwane yakho kubalulekile kithi. Kungakho amaseva ethu etholakala e-Austria futhi ngenxa yalokho angaphansi kwemithetho eqinile yokuvikela idatha. Ngenxa yomphakathi wethu oyingqayizivele, isithangami sakho singavakashelwa izinkulungwane zamalungu ngokushesha nje kokubhalisa. Iforamu yakho ilungele ukuqala masisha ngemuva kokungena ngemvume futhi kulula ukuyifisa. Imibandela yokusebenzisa kusukela ekusetjenzisweni iyasebenza.